Kuboshwe isihlobo kwelokubulawa kwephoyisa - Ilanga News
Home Izindaba Kuboshwe isihlobo kwelokubulawa kwephoyisa
Kuboshwe isihlobo kwelokubulawa kwephoyisa
Kuthiwa abakwasidlodlo bashaqe izinkabi zisazikholisa ngotshwala nenyama
NguSerg Siyabonga “Baby Police” Radebe.
KUVE-LE oku-shaqi-sayo kubo-shwa owesifazane oyisihlobo sephoyisa lase-Mlazi, ILANGA elibike ngo-Lwesine ukuthi ladutshulwa labulawa ngoLwesibili olwe-dlule kade lidlala i-snooker, lilinde ingoduso yalo.
ILANGA lithole ukuthi liphe-le kabi idi-li lika-Mkhi-pheni ebeli-kwa-W, eMlazi, ebelihlelwe ngabesilisa abathathu okuthiwa babethe-ngwe yilona wesifazane ngo-R15 000 umuntu emunye ngesikhathi beshaqwa ngamaphoyisa ngoku-bulala uSerg Siyabonga Cyril “Baby Police” Radebe (34), oshiye ingane enezinyanga eziwu-6 ize-lwe.
Kuthiwa utshwala nenyama be-kuxhaphakile, ingoma isho phezulu, kushaywa amavosho nge-sikha-thi kugasela amaphoyisa.
ILANGA lithole ukuthi lesi si-hlobo sikamufi – esingeke sisidalule okwamanje ngenxa yokunqi-ndwa wumthetho – sithenge izi-nkabi ukuba zimsoconge ngoba sidinwa wukuthi akasisizanga ngesikhathi kunecala esasilivule esiteshini samaphoyisa.
Kuthiwa ngoMgqibelo lona we-sifazane unike inkabi ngayinye u-R5 000, wazithembisa ukuthi uzobuye azinike u-R10 000 ngayi-nye, uma esethole imali. ILANGA lithole ukuthi kuthe uma ama-phoyisa efika edilini, abasolwa bangabuza mkhuhlane, badedela inhlamvu bebhekise kuwona.
Nawo kawazithelanga ngaba-ndayo, aphendule ngenganono, agcina ethele inkabi eyodwa
othulini, yafela endaweni yesi-gameko. Ozakwabo ababili abashaqwe ngamaphoyisa, kuthiwa, balihlanze lonke iqiniso, basho ukuthi bebeqashwe yisihlobo sikamufi ngoba sidinwa wukuthi akasisizanga ngesikhathi kunecala esasilivulile esiteshini samapho-yisa eGG kwaV, eMlazi.
UMnu Phelelani Radebe ongu-mfowabo kamufi, utshele ILANGA ngesikhathi lihambele umndeni izolo ngeSonto – ukuthi besebezwile ukuthi kunabantu ababo-shiwe ngokubulawa komfowabo. Uveze ukuthi kubathukuthelise kakhulu ukuzwa ukuthi kubo-shwe nesihlobo sabo kulolu daba.
“Ngangikhona ngibuka ngesi-khathi kudutshulwa kubulawa umfowethu kodwa kungelula ukuba ngimsize ngoba abantu ba-bephethe izibhamu. Laba bantu babekade bemlandela futhi babenesiqiniseko sokuthi akasiphethe isibhamu.
“Okubuhlungu nje lo muntu wenze le nto azi kahle ukuthi umfowethu unengane esanda ku-zalwa. Lo muntu uyisihlobo se-thu, sisadidekile ukuthi kungani le ntombazane ize yathenga izi-nkabi ukuba zibulale umfowethu ngesihluku esingaka.
“Ubengumfana olungile futhi ewusizo emphakathini, engazwa-ni nento ebhedayo,” kusho uMnu Radebe ekhombisa ILANGA umu-zi oyisitezi kamsolwa, oseduze kwakubo.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, ukuqinisekisile ukuthi amaphoyisa abophe abasolwa abathathu phakathi kwabo oku-khona nowesifazane oyisihlobo sikamufi. Uthe kulindeleke ukuba abasolwa bavele eNkantolo yeMantshi eMlazi khona madu-ze ngecala lokubulala ababheke-ne nalo.
Previous articleAbeMKMVA basongela uhulumeni
Next articleZimkhalele owesifazane obesolwa ngokuthengela umyeni izinkabi